Forex တွင် Pip ဆိုတာဘာလဲ - Forex Trading တွင် Pips အကြောင်းအားလုံးသိပါ
ပညာရေး - ဆောင်းပါးများနှင့်သင်ခန်းစာများ - Forex အခြေခံဆောင်းပါးများ - Forex အတွက် Pip ကဘာလဲ?
အကယ်၍ သင်သည် Forex ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်သတင်းဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုပါကဝေါဟာရသို့မဟုတ်အမှတ်အသားကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ pip သည် forex trading တွင်အသုံးအများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Forex တွင် pip နှင့် point ဆိုတာဘာလဲ။
ဤဆောင်းပါး၌ Forex စျေးကွက်တွင်မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေသည်၊ ဤသဘောတရားကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ဟူသောမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေဆိုပါလိမ့်မည် Forex ကုန်သွယ်။ Forex တွင်မည်သည့် pips များကိုရှာဖွေရန်ဤဆောင်းပါးကိုသာဖတ်ပါ။
Forex Trading တွင်မည်သည့် pips များရှိသနည်း။
pips စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအတွက်အနည်းငယ်မျှသာပြောင်းလဲမှုဖြစ်ကြသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ငွေလဲနှုန်းသည်မည်မျှပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတိုင်းတာရန်စံယူနစ်ဖြစ်သည်။
အစပိုင်းတွင်ပိုက်သည်အနိမ့်ဆုံးအပြောင်းအလဲကိုပြသခဲ့သည်။ ပိုမိုတိကျသောစျေးနှုန်းရှာဖွေခြင်းနည်းစနစ်များပေါ်ပေါက်လာပါကဤကန ဦး အဓိပ္ပါယ်သည်သက်ဆိုင်မှုမရှိတော့ပါ။ အစဉ်အလာအရ Forex စျေးနှုန်းများကိုဒdecimalမနေရာလေးခုအတွက်ကိုးကားထားသည်။ အစပိုင်းတွင်စတုတ္ထဒdecimalမကိန်းတန်ဖိုးနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကို pip ဟုခေါ်သည်။
ပွဲစားများအားလုံးအတွက်စံသတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည် ပလက်ဖောင်းကုန်သည်များသည်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲဆက်သွယ်ပြောဆိုခွင့်ကိုတိုင်းတာရာတွင်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောတိကျသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိပါကအချက်များ (သို့) tick စသည့်ယေဘူယျဝေါဟာရများနှင့် ပတ်သက်၍ မမှန်ကန်သောနှိုင်းယှဉ်မှုများရှိနိုင်သည်။
တစ် ဦး တည်းပိုက်ဘယ်လောက်နှင့်မှန်ကန်စွာရေတွက်ဖို့ဘယ်လို?
အများစုအတွက် ငွေကြေးအားလုံး, တ ဦး တည်း pip စတုတ္ထဒdecimalမကိန်း၏လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးခြွင်းချက်များမှာဂျပန်ယန်းနှင့်ဆက်စပ်သော Forex အတွဲများဖြစ်သည်။ JPY အတွဲများအတွက် pip တစ်ခုသည်ဒုတိယဒdecimalမနေရာတွင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည်အချို့သောဘုံငွေကြေးအတွဲများအတွက် Forex တန်ဖိုးနှင့်မည်သည့်အရာနှင့်တူသည်ကိုနားလည်ရန်အတွက် Forex တန်ဖိုးများကိုပြသည်။
Forex pip တန်ဖိုး (၁ lot)
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CAD
Forex အားလုံးအတွက် pip တန်ဖိုးနှိုင်းယှဉ်မှု
သင်၏အနေအထားရှိပိုက်လိုင်းတစ်ခုကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်၊ ပိုက်လိုင်းမည်မျှကုန်ကျသည်ဟူသောမေးခွန်းကိုသင်ဖြေနိုင်သည်။ သင် EUR / USD ကုန်သွယ်လိုသည်ဆိုပါစို့, သင်တ ဦး တည်းဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ တစ်ခုမှာအများကြီးယူရို 100,000 ကုန်ကျခဲ့သည်။ ပိုက်တစ်ခုသည် EUR / USD အတွက် ၀.0.0001 ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့် ၀.၀၀၀၁ = ၁၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
သင်သည် EUR / USD ကို 1.12250 တွင်ဝယ်ပြီးလျှင်သင်၏နေရာကို 1.12260 တွင်ပိတ်ပါ။ နှစ်ခုအကြားခြားနားချက်:
တနည်းအားဖြင့်ခြားနားချက်တစ်ခု pip ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀ ရလိမ့်မည်။
မင်းရဲ့ EUR / USD ကိုမင်းရဲ့ 1.11550 မှာဖွင့်လိုက်တာဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စာချုပ်တစ်ခုကိုဝယ်လိုက်သည်။ စာချုပ်တစ်ခု၏ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်ယူရို ၁၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။ မင်းရောင်းလိုက်ပြီ ယူရိုဝယ်ရန်ဒေါ်လာ။ ၏တန်ဖိုး သင်ရောင်းသည့်ဒေါ်လာသည်ငွေလဲနှုန်းကိုသဘာဝကျကျထင်ဟပ်နေသည်.
ယူရို ၁၀၀,၀၀၀ x ၁.၁၁၅၅၀ ဒေါ်လာ / ယူရို = အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၁၅၅၀
သင်သည် ၁.၁၁၆၀၀ တွင်စာချုပ်တစ်ခုရောင်းချခြင်းဖြင့်သင်၏ရာထူးကိုပိတ်လိုက်သည်။ ရှင်းနေသည်မှာသင်သည်ယူရိုငွေကိုရောင်း။ ဒေါ်လာများဝယ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အစပိုင်းတွင် $ 111,550 ရောင်းချခဲ့သည် နောက်ဆုံးတော့ အမြတ်အစွန်းအတွက် $ 111,560 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် $ 10 ၏။ ဤအရာ မှနေ၍ သင်တစ် ဦး တည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကသင့်ကိုဒေါ်လာ ၁၀ ရစေသည်။
pips ၏ဤတန်ဖိုးသည်ဒdecimalမဂဏန်းလေးလုံးအထိကိုးကားထားသော Forex အတွဲအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
အများဆုံးသိသာထိုကဲ့သို့သောငွေကြေးဂျပန်ယန်းဖြစ်ပါတယ်။ ယန်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောငွေအတွဲများကိုအစဉ်အလာအားဖြင့်ဒdecimalမ ၂ နေရာဖြင့်ဖော်ပြပြီး၎င်းအတွဲများအတွက် Forex pips ကိုဒုတိယဒdecimalမနေရာဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ထို့ကြောင့် USD / JPY ဖြင့် pips များကိုမည်သို့တွက်ချက်ရမည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
အကယ်၍ သင်သည် USD / JPY တစ်တန်ကိုရောင်းလျှင်ပိုက်တစ်လုံးပြောင်းလဲခြင်းသည်သင့်အားယန်း ၁၀၀၀ ကုန်ကျမည်။ နားလည်ရန်ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ကြပါစို့။
မင်းရောင်းလိုက်ပြီဆိုပါစို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY နှစ်ခုအများကြီး ၏စျေးနှုန်းမှာ 112.600။ တစ်ခုမှာ USD / JPY သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ = ဒေါ်လာ ၂ သိန်း ၁ သောင်းဒေါ်လာ ၂ သိန်း ၁၀၀ x ၁၁၂.၆၀၀ = ၂၂၅၂၀,၀၀၀ ဂျပန်ယန်းကိုသင်ရောင်းသည်။
စျေးနှုန်းကသင့်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးသင်ဆုံးဖြတ်သည် သင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချ။ သင် ၁၁၃.၀၀၀ မှာပိတ်လိုက်တယ် USD / JPY အတွက်ပိုက်တစ်ခုသည်ဒုတိယဒdecimalမနေရာတွင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။ စျေးကပြောင်းသွားပြီ 0.40 မင်းကိုဆန့်ကျင်, အရာ 40 pips ဖြစ်ပါတယ်။
USD / JPY အမြောက်အများကို ၁၁၃.၀၀၀ ဖြင့်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သင်၏ရာထူးကိုပိတ်လိုက်သည်။ ဤနှုန်းထားဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ ကိုရွေးရန်၊ သင်သည်ဂျပန်ငွေယန်း ၂ x ၁၀၀၀၀၀ x ၁၁၃.၀၀၀ = ၂၂၆၀၀၀၀၀ လိုအပ်သည်။
၎င်းသည်သင်၏ကန ဦး ဒေါ်လာရောင်းချမှုထက်ယန်း ၁၀၀,၀၀၀ ထက်ပိုသောကြောင့်သင်၌လိုငွေပြမှုယန်း ၁၀၀၀၀၀ ရှိသည်။
100,000 pips ပြောင်းခြင်းအတွက်ယန်း ၁၀၀၀၀၀ ဆုံးရှုံးခြင်းသည်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပိုက်လိုင်းတိုင်းအတွက်ယန်း ၈၀,၀၀၀ / ၄၀ = ၂,၀၀၀ အရှုံးရှိသည်။ သင်အတွဲ ၂ ရောင်းပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဤပိုက်တန်ဖိုးသည်ယန်း ၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်၏အကောင့်သည်ငွေကြေးအမျိုးအစားမဟုတ်သောအခြားငွေကြေးဖြင့်ငွေဖြည့်ပါက၎င်းသည်ပိုက်၏တန်ဖိုးကိုသက်ရောက်လိမ့်မည်။ သငျသညျမဆိုသုံးနိုင်သည် ပိုက်တန်ဖိုးကိုဂဏန်းတွက်စက် အွန်လိုင်းအမှန်တကယ် pip တန်ဖိုးများကိုလျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်ရန်အွန်လိုင်း။
Forex ကုန်သွယ်မှုအတွက် pips ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
အချို့က "pips" ဟူသောဝေါဟာရသည်မူလအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်ရာခိုင်နှုန်း -In-Point ကို"ဒါပေမယ့်ဒီဟာကမှားယွင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အချို့ကမူ၎င်းသည် Price Interest Point ဟုဆိုလိုသည်။
Forex အတွက်ပိုက်ကဘာလဲ? ဤအသုံးအနှုန်း၏မူလအစမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူငွေစက္ကူများသည်ငွေကြေးရောင်းဝယ်သူများအားငွေလဲလှယ်နှုန်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောဆိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဆွေမျိုးအသုံးအနှုန်းသည်အခြေခံအမှတ် (သို့မဟုတ်နှစ်မျိုး) သည်အတိုးနှုန်းသေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများကိုဆွေးနွေးရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်နှင့်ဆင်တူသည်။ ဒါဟာ cable ကို, 50 တိုးမြှင့်ခဲ့သည်ဟုပြောထက်, ဥပမာ, 0.0050 အချက်များမြင့်တက်ပြောပြီဖို့အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူသည်။
Forex စျေးနှုန်းဘယ်လိုပေါ်လာသလဲကြည့်ရအောင် MetaTrader နောက်တဖန် forex အတွက်ပိုက်သရုပျဖျောရန်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံသည် MetaTrader ရှိ AUD / USD အတွက်အော်ဒါများကိုပြသသည်။
ပုံတွင်ပြထားသောကိုးကားသည် 0.69594 / 0.69608။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးဒdecimalမနေရာဂဏန်းသည်အခြားဂဏန်းထက်သေးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကပိုက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ခြားနားချက် လေလံစျေးနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုစျေးနှုန်းအကြား 1.4 pips။ အကယ်၍ သင်သည်ဤစျေးနှုန်းဖြင့်ချက်ချင်း ၀ ယ်ပြီးရောင်းပါကစာချုပ်သည် ၁.၈ ဖြစ်သည်။
၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်သတိပြုပါ အမိန့်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ ၀ င်းဒိုးတစ်ခု၊ သင်သည်ဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်အမြတ်ထုတ်ရန်အမှတ်အသားအချို့ကိုရွေးချယ်ရန် drop-down menu တစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ခုရှိ၏ အချက်များနှင့် pips အကြားမရှိမဖြစ်ခြားနားချက်။ ဤ drop-down စာရင်းရှိအမှတ်များသည်ပဉ္စမဒdecimalမနေရာကိုရည်ညွှန်းသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်၊ ပိုက်၏တန်ဖိုး၏ဆယ်ပုံတစ်ပုံသည်ဒmakingမကိန်းသေဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်ပါက 50 မှတ်ဒီမှာမင်းတကယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်5pips ရွေးချယ်ရာတွင်.
Forex စျေးနှုန်းများဖြင့် pips များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုသုံးပါ ထဲမှာ MetaTrader ပလက်ဖောင်း။ ဒီဟာကသင်စျေးကွက်ပေါက်စျေးကိုကြည့်ရှု။ ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်သရုပ်ပြအကောင့်ထဲ၌ virtual funds ကိုသာသုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားပါကစတော့အိတ်ရောင်းဝယ်မှုတွင် pip ကဲ့သို့သောအရာရှိမရှိသင်သိလိုပေမည်။ အမှန်မှာ၊ စတော့စျေးကွက်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ pence များမသုံးပါ၊ အကြောင်းမှာ pence နှင့်ဆင့်တို့ကဲ့သို့စျေးနှုန်းများပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများရှိပြီးဖြစ်သည်။
ဥပမာအောက်ဖော်ပြပါပုံသည် Apple စတော့ရှယ်ယာများအတွက်အမှာစာကိုပြသည်။
ကိန်းဂဏန်း၏ကိန်းဂဏန်းများသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ဒdecimalမကိန်းများသည်ဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အပေါ်ပုံကပြသထားတယ် ကုန်သွယ်မှု 8 ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့် pips ကဲ့သို့သောအခြားဝေါဟာရကိုမိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးသည်အထွေထွေဝေါဟာရများပါဝင်နိုင်သော်လည်းစျေးနှုန်းနှင့်ညီမျှသောအသေးငယ်ဆုံးပြောင်းလဲမှုလှုပ်ရှားမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အဆိုပါ တစ် ဦး ပိုက်၏တန်ဖိုး ညွှန်းကိန်းများနှင့်ကုန်စည်အတွက်သိသိသာသာကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရွှေနှင့်ရေနံစိမ်းစာချုပ်များသို့မဟုတ် DXY သည်ငွေကြေးသို့မဟုတ်စတော့အိတ်ချိန်း CFD များနှင့်မတူပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အရေးကြီးသည် တစ် ဦး ပိုက်၏တန်ဖိုးကိုတွက်ချက် အထူးသဖြင့်တူရိယာအတွက်ကုန်သွယ်ရေးဖွင့်လှစ်မီ။
ယခုသင်သည်“ Forex trading ၌ဘာများရှာနေသနည်း” ဟူသောမေးခွန်း၏အဖြေကိုသင်သိသင့်သည်။ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုပြောင်းလဲရန်တိုင်းတာသည့်ယူနစ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်သည်တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်မည်သို့မည်ပုံသိရမည်ကိုသိထားရမည် pips ၏တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်နေကြသည်။ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်ကိုနားလည်ရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤလမ်းညွှန်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစတင်ရန်သင့်အားအခြေခံဗဟုသုတပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
Related ဆောင်းပါးများ Forex ဇယားများကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်နည်း အဘယ်အရာကို Forex Trading အတွက်ပြန့်နှံ့? တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် Forex Trading ကိုလေ့လာပါ